Khabiir Kala Duwan: Noocyada Qoraalka Dhismaha iyo Sida Loo Horumariyo Them For SEO Better
Mid ka mid ah wax-ku-oolnimada raadin wax ku ool ah ayaa ah isticmaalka qoraalka qalabka. Marka si habboon loo isticmaalo, qoraalka kumbuyuutarka wuxuu si weyn u wanaajin karaa darajeynta bogga boodhadhka raadinta ee bogagga (SERPs).
Kuwa aan aqoon u laheyn mawduucaan, Andrew Dyhan, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiil, wuxuu sharxayaa in qoraalka ereygu uu tixraacayo cinwaanada la riixi karo ama text in hyperlink. Inta badan, jilayaasha / qoraalka ayaa ku jira midab kala duwan inta ka hartay mawduuca waxaana mararka qaarkood lagu tiriyaa - credit counseling companies in massachusetts. Marka uu isticmaaluhu qoro qoraalka heesaha, isaga ama iyada ayaa loo geeyaa meel kale. Waxaad kari kartaa kormeerahaas adoo isticmaalaya HTML ama CSS.
Maxay qoraalladu ugu muhiimsan yihiin SEO?
Qoraallada calaamadaysan maaha inay noqdaan kuwa caan ah sida ay maanta yihiin haddii aan loo isticmaalin ujeedada dhabarka. Waxay kaalin weyn ka ciyaaraan isticmaalka backlinks (muhiimad gaar ah SEO). Intaa waxaa dheer, makiinadaha search-ka waxay u adeegsadaan inay ciqaabayaan bogagga shabakadda si aad u-feejignaan iyo isbeelisid. Tani waa sababta ay muhiim u tahay khabiirada SEO si ay si cad u fahmaan sida loo isticmaalo qoraallada saxda ah.
Qoraalka qoraalka ah ayaa sidoo kale faa'iido u leh akhristayaasha waxyaabaha ku jira maaddaama ay siinayso fikrad ah waxa ay tahay in ay filayaan in ay ka helayaan goobta ujeedka bartilmaameedka.
Noocyada qoraalka ah
Waxaa jira kala duwanaansho badan oo qoraal ah. Khabiirada SEO waxay isticmaali karaan hal ama isku dhafan kala duwanaanta soo socota si ay ufududaan content ay:
Kalluumeyaal la bartilmaameedsaday: Khabiirada suuqgeynta internetka ee ku lug leh "qaabka =" qoraal-qurxinta: midnaba; xadka hoose-hoose: 1px adag; href = "https://semalt.com/qa/seo-results..htm "> xiriiriyaha dhismaha abuuro qoraalo ku leh ereyada muhiimka ah ee u dhigma ereyada muhiimka ah ee bogga internetka ama dukumiintooda ay ku beegsanayaan Si kale haddii loo dhigo, haddii aad rabto inaad isku xirto bogga ka kooban waxyaabo ku saabsan 'fikradaha dayactirka jikada' Isticmaal ereyadan muhiimka ah ee ku yaala hyperlinks
Qoraalka guud ee qoraalka: kuwani waa xidhiidhyo la riixi karo kuwaas oo kugula socodsiiya kheyraad kaa caawinaya. Tusaalooyinka baaritaanada guud waxaa ka mid ah "macluumaad dheeraad ah halkan", "guji halkan si aad u heshid caddayn lacag la'aan ah", "hel eBaar bilaash ah halkan" iyo wixii la mid ah.
Kudhado la yiraahdo: Kudhadaha la calaamadeeyay waxay isticmaalaan magaca calaamadda ganacsiga goobta sida qoraalka. Waxaa loo tixgeliyaa nooca ugu badbaado badan ee la isticmaalo. Taasi waa sababta ugu weyn ee sida Amazon ay u isticmaali karto qoraallada calaamadeysan ee calaamadeysan sida ugu macquulsan ee ku jira mawduucooda maaddaama ay jirto yaraanta suuragalka ah ee ka-roonaanta.
Guul-celin waa isticmaalka xad-dhaafka ah ee isla erayga ah ee bogga ama muuqaalka muuqaalka qoraalka ee bogag badan oo bogga ah. Waxay u horseedi kartaa ciqaab la'aanta mashiinnada raadinta maaddaama bogga loo arko inuu yahay spammy oo aan ahayn user-friendly. Sidaa daraadeed, waa in aad ka fogaato qaabka ugu habboon.
Xiriirada qaawan ee qaawan: Kuwani waa qoraalo ay ku qoran yihiin isticmaalka URL ee goob si ay dib ugu noqoto. Way fududahay in la isticmaalo laakiin waxay ubaahantahay in si wanaagsan loo qaybiyo maadada. Cufnaanta xirmooyinka isku xidhan ee qaawan waa inaanay ka badnaan 15%.
Sawirro iyo 'alt' tagsi ahaanba: Isticmaalka sawirada ku jira bogga internetka ayaa aad u sarreeya maanta. Waxay ka caawisaa kordhinta isdhexgalka user ee leh content. Markaad u isticmaasho sawir ahaan xiriirin meel kale, waxaad sidoo kale bixisaa 'alaab' ku haboon sawirka. Raadinta mashiinka ayaa ka akhriya buuggan 'sub-' 'oo ah qoraalka qalinka ah
LSI (Indexing Latentic Causes): LSI waxay si fudud u adeegsanaysaa isticmaalka isku midka ah (ma aha qasab in loola jeedo isku dhafnaan la mid ah) ee erayga muhiimka ah. Waxay ku kala duwan yihiin kala duwanaanshaha erayga muhiimka ah. Qalabka LSI waa mid aad waxtar u leh markaad rabto inaad isticmaasho ereyga muhiimka ah ee isku xirnaantaada
Kala duwanaansho kale oo qoraal ah taas oo loo tixgelinayo amaan iyo wax-tar leh waa isku-darka lafaguridda iyo calaamadaha muhiimka ah. Xaaladdan, waxaad ku abuureysaa qalabyo leh magacaaga calaamadda iyo ereyga muhiimka ah ee aad dooratay. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa "nadiifinta adeega '' magacaaga '' sida 'brand + keyword key text
Haddii aad rabto inaad ka hesho qoraallada ugu fiican, waxaad hubisaa inaad u isticmaali kartid feker ahaan. Waa in loo qaybiyaa si haboon iyo cufnaanta saxda ah. Waa inay sidoo kale noqdaan kuwo ku habboon oo ku lug leh mawduuca labadaba bogga isku xiraya iyo bartilmaameedka. Qoraallada Spammy ee kudubdhexaadka ah waa tigidh toos ah oo lagu ciqaabayo sida markaa kantaroolayaasha aan dabiiciga ah ku qornayn qoraalka. Marnaba ha isticmaalin qoraalada sida qalabka ah ee ku jira mawduucaaga maaddaama ay si dhab ah u dhaawacayaan SEO-gaaga.